luchadora | ထိပ်တန်းအပေါက်ဆိုက်ကို | Mobile Casino Online | £€$800 Deposit Bonus :)
ငါး reels သုံးဆယ် paylines slot က, Luchadora Thunderkick Software က powered ဖြစ်ပါတယ်. ဤ slot နှစ်ခုဆုကြေးငွေဂိမ်း အဆိုပါကစားသမားမှဖျော်ဖြေရေး၏ဝန်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အလွန်ဖျော်ဖြေမှုမက္ကဆီကန်နပန်းအားဖြင့်မှုတ်သွင်းနေသည်.
ဤ slot နှစ်ခုဆုကြေးငွေဂိမ်း NYX နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. Thunderkick ခေါ်ငယ်ရွယ်ပေမယ့်အလားအလာကုမ္ပဏီကတီထွင်နေသည်. ဒီကုမ္ပဏီကတီထွင်အွန်လိုင်းဂိမ်းဖန်တီးမှုဂိမ်းတွေနဲ့အတူမတူညီ themes များပူဇော်.
ဤ slot နှစ်ခုဆုကြေးငွေဂိမ်း တစ်ဦးချင်းစီ reel အပေါ်လေးခုသင်္ကေတများရှိပါသည်ဆိုလိုတာကလေးတန်းစီ slot ကနှင့်အတူငါး reels ဖြစ်ပါသည်. Luchadora သုံးဆယ် paylines fixed နေကြတယ်. ဒီဂိမ်းက၎င်း၏လေးသိသိသာသာထောင့်နှင့်အတူအနပန်းလက်စွပ်အတွက်သတ်မှတ်နှင့်များစွာသောပန်းပိုစတာအကြောင်းကို strewn နေကြတယ်. အဆိုပါမှတ်သားထောင့်ဆုကြေးငွေ features တွေအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍရပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ slot နှစ်ခုဆုကြေးငွေဂိမ်း 10p ၏နိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးမှအမျိုးမျိုးသောသဟဇာတကိရိယာများပေါ်တွင်လှည့်ဖျားနှုန်း£ 100 အထိအများဆုံးလောင်းကြေးအထိကစားနိုင်ပါ. လေးမျက်နှာဖုံးနပန်းသမားများအားအယ်လ် Toro, Rayo, အဆိုပါမြွေ, နဲ့ El Pantera, အဖြစ် feisty နှင့်ကျောချမ်းဖွယ် Campeon, အဆိုပါ reels ပေါ်တွင်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုး icon များဖြစ်ကြသည်. အဆိုပါအနိမ့်တန်ဖိုးကိုသင်္ကေတများကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များအတွက်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ငရုတ်သီးနဲ့တူအချို့သောမူရင်းမက္ကဆီကန်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များဖြင့်ကိုယ်စားပြုနေကြသည်. ဤ slot နှစ်ခုဆုကြေးငွေဂိမ်း ထို့အပြင်နှစ်ခုဆုကြေးငွေသင်္ကေတများပါဝင်သည်. သူတို့ဟာ Lucha Smackdown နှင့် Lucas အပိုဆုသင်္ကေတအားဖြင့်ဖော်ပြပါရှိသည်.
ဒီ slot ကများ၏အမျိုးမျိုးသော features တွေရှိပါတယ်:
လက်စွပ်ထောင့်- မဆိုပြိုင်ဖက်ဆိုသိသိသာသာထောင့်ပေါ်လျှင်ပုံမှန်ဂိမ်းစဉ်အတွင်းထို့နောက် reels ပေါ်မှာရှိသမျှသည်အခြားတူညီသင်္ကေတကိုတောသို့ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မည်. ဒါဟာသင်ပိုမြင့်အနိုင်ရပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း၏ပိုကောင်းခွင့်အလမ်းတွေကိုပေးသည်. ရိုင်းအားလုံးအခြေခံသင်္ကေတများနေရာတွင်အစားထိုးပါလိမ့်မယ်.
Lucha Smackdown- ပုံမှန်ဂိမ်းထဲမှာ, သာ reel ပေါ်မှာဤအိုင်ကွန်မြေများ5နှင့်ဆုသင် 7, 11, သို့မဟုတ် 15 အခမဲ့ဗိုင်းငင်ပြီးလည်းတက်မှ 15x မြှောက်ကိန်းနှင့်တကွသင်ဆု.
Lucha အခမဲ့ဗိုင်းငင်- ဒီ feature သုံးခုသို့မဟုတ်ထိုထက်ပို Lucha ဆုကြေးငွေအိုင်ကွန်လေယာဉ်ဆင်းသက်ခြင်းဖြင့်အစပျိုးနေသည်. သငျသညျလကျခံ 7, 11, နှင့် 15 ဆင်းသက်အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ 3, 4, သို့မဟုတ်5ဆုကြေးငွေသင်္ကေတများ. အဆိုပါလက်စွပ်ထောင့်ဒီ feature စဉ်အတွင်းတက်ကြွနေကြသည်. သူတို့ကိုမဆိုပေါ်မဆိုပြိုင်ဖက်ဆင်းသက်သည့်အင်္ဂါရပ်များကြာချိန်များအတွက်ရိုင်းဆက်လက်တည်ရှိဦးမည်. ကိုတောသို့ပြောင်းလဲနေတဲ့အားလုံးလေးခုနပန်းသမားများအားပိုပြီးအမြတ်အစွန်းအိုင်ကွန်, La Luchadora အားလုံး Misterioso Campeon icon များရာယူစေသည်.
luchadora အံ့သြဖွယ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး၏ဝန်ကိုထောက်ပံ့ပေးပေမယ့်လည်းအနည်းငယ်မြင့်မားကြိုးဆုကြေးငွေ features တွေပါဝင်ပါတယ်မသာတဲ့စိတ်ကူး slot ကဖြစ်ပါတယ်.
Shangri-la ၏ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ: စပျစ်သီးပြွတ်ချေ™